I-FAQ-NANTONG CHITSURU IZITHUTHA COZ, CO.
Ewe, singumenzi oqeqeshiweyo ukusukela kwi1996 ekuboneleleni ngokutya okuphezulu, sinokubonelela ngexabiso elifanelekileyo lesuti.
Ngaba ungandinceda ukuba ndenze iMveliso yam yeeNqaku?
Ngokuqinisekileyo, uphawu lwe-OEM lunokwamkelwa.
Yintoni izibonelelo zeSoya Soyce yakho?
Okokuqala, xa kuthelekiswa nesosi yesoya emarikeni, eyethu ayinakukhuselwa. Okwesibini, sineentlobo ezininzi zesosi yesosi enezinto ezinomdla ohlukileyo kwaye ezinokusetyenziswa kukutya okuphekiweyo okuhlukeneyo. Okwesithathu, isosi yethu ye-soya inokwenziwa ngokwemiyalelo yomthengi.
Uyintoni umahluko phakathi kuka-Hon Mirin kunye noMirin Fuu?
I-mirin fuu inomxholo wotywala ophantsi kakhulu kwaye iyindlela entle enencasa ye-hon mirin. Kwamanye amazwe apho butywala bungahluthwanga, ungabusebenzisa endaweni ye-hon mirin.
Ndingandwendwela iFektri yakho?
Wamkelekile ngobubele, siya kukubonisa umgca wethu wemveliso kunye nendawo yethu.
Zingaphi izatifikethi Inkampani yakho enayo?
Inkampani yethu ifumene izatifikethi ze-KOSHER, HALAL, ISO9001 kunye ne-HACCP.
Yenziwe njani iSau Soyce yakho?
Isosi yethu ye-soy yenziwa kunye neembotyi zesoya kwaye iphindwe yenziwe ngokwesiko, kulungiso lwendalo. Akukho kongeza umbala, kunye nokongezwa okukhuselekileyo.
Yintoni umahluko phakathi kweChitsuru kunye neChitsuruya?
IChitsuru yinkampani yethu ebizwa ngokuba yi-Nantong Chitsuru Foods Co, Ltd. IChitsuruya luphawu lwethu lwenkampani.
Yintoni Enika Amanzi Olwandle Amandla Obuhlanga bawo Omangalisayo?
Indalo. Amanzi olwandle anencasa yemvelo enetyiwa enencasa ebangela ukuba ingcamle yahlukile-kwaye ilungile.
Kutheni le nto uLwandle lwaselunxwemeni olunambitha iFishy kwaye neyethu ayenzi?
Okona kubaluleki ngumgangatho wamanzi olwandle kwaye ke ibhalansi yokuhluma.
Ungayithenga Phi Amanzi Olwandle Ogcadiweyo?
I-Pls khetha i-Chitsuruya brand. Amanzi olwandle asithengisa ngokungqongqo. Silandele i-ISO9001; Imigangatho ye-HACCP yokugcina ukhuseleko lokutya & icocekile. Amanzi olwandle agciniweyo anezi mpawu: luhlaza omnyama, incasa, ukubambeka, akukho alga kwiphepha, akukho mngxunya okanye iphepha laphukileyo. Abafuna ukwazi ngaphezulu, unxibelelwano nge-pls: [Imeyile ikhuselwe]
Ungayikhetha njani into eyomileyo yamanzi olwandle (Isixhobo seSeed eatywetyiweyo) YoPhezulu?
Amanzi aselwandle aphezulu awomileyo: Ngokuqhelekileyo, amanzi amnandi aselwandle abemnyama kwaye anombala omdaka kwaye oqaqambe kakhulu.Linambitheka kamnandi, ithenda, incinci kwaye akukho mphunga ingafaniyo.Ngokubonakala, isiqwenga samanzi aselwandle asibekekile kwaye akukho monakalo.Aso, inobukhulu obuhanjiswe kakuhle kunye nomphetho ococekileyo. Akukho ndawo! Akukho luhlaza! Amanzi aselwandle aphantsi aselwandle: Ngombala ophuzi kwaye awunabukhanyakhanya.Inambitha indala kwaye ayinamakha.Ngokubonakala, ipikoko yolwandle iyonakaliswa kwaye ayihambelani.Aso, ixutywe kwiidayoms kunye nolwandle oluhlaza kwaye inendawo.
Nguwuphi umahluko phakathi kweKorea yolwandle kunye neChitsuruya yolwandle?
Amanzi olwandle aseKorea acocekile kakhulu ukuba enze i-sushi kunye nokungathandeki kube mnandi kakhulu.
Yintoni ubuchwephesha beSau Soyce yakho kwiBhotile encinci?
Ungayisebenzisa ngokukhawuleza ukuze kungabi lula ukuvelisa iibhaktheriya.ukuphambanisa incasa yentsusa yesosi yesosi.